Zvikamu zveGerman zveyero uye zveGerman zviyero zvehuremu
Tinoda kuyera uye kuyera zvikamu panguva dzese dzehupenyu hwedu. Kuziva izvo zvikamu izvi zviri mumutauro wedu uye nezvavanoita zvichatibatsira kudzidza zvakaenzana zveGerman. Nenyaya yatichafukidza muchidzidzo chino Kuyera kweGerman uye Units Units uye pakupera kwechidzidzo iwe unodzidza mashandisiro ekushandisa aya mauniti kana uchitaura kana kunyora muchiGerman.
Zvikwata zveGerman zveMiyero uye Kurema
Kuyera kweGerman uye Units Units Sezvo isu tichifunga kuti ichakwezva kutarisisa kwako paunenge uchiongorora tafura, tinoda kunongedza kuti akawanda mayuniti 'ChiGerman neTurkey zvakafanana kune mamwe mazwi maererano nezvose zviperengo nemadudziro. Iyi tsananguro inowanzo shanda kune huremu hwekuyera mayuniti, asi haifanire kukanganikwa kuti pane zvisaririra. Sezvo mutauro wedu nemimwe mitauro yakawanda zvichitora mazwi kubva kune mumwe nemumwe, zvakajairika kuti izvi zvakafanana zvivepo. Isu tinofunga zvichave nyore kwazvo kuchengeta mundangariro nekuti ivo vakafanana kune mumwe nemumwe.
Kuyera kweGerman uye Units Units Isu tichagadzira tafura nekutarisa mayuniti ehuremu uye huremu semisoro yakapatsanuka kuti iwe ugone kurangarira zvirevo zviri nyore apo uchigadzirisa nyaya.
Zvikwata zveGerman zveKuyera Zvinoratidza Kureba uye Kureba
1 Sentimita → 1 Zentimeter (cm)
1 Mamirimita → 1 Mamirimita (mm)
1 Decimeter → 1 Dhezimeter (dm)
1 Kilomita → 1 Kilometre (km)
1 mita mita → 1 Quadratometer
1 Square kilometera → 1 Quadratkilometer
1 decare / acre → 1 mahekita
1 tsoka → 1 Kukakavara
1 Maira → 1 Meile
1 padiki → 1 nzvimbo yemhuka
Zvikwata zveGerman zveKuyera Zvinoratidza Kurema uye Chikamu
1 kilogiramu → 1 Kirogiramu (kg)
1/2 Kilo / Hafu Kilo → 1 Mari (lb)
1 Giremu → 1 magiramu
1 milligram → 1 Mamirigiramu (mg)
50 kilogiramu → 1 Zentner (ztr.)
1 tani → 1 Tonne (T)
1 Centilita → 1 zentiliter (cl)
1 Mamiriyoni → 1 Mamiriyoni (ml)
1 Galloni (4,5 Liter) → 1 Galloni (gal)
1 Cubic mita → 1 Cubicmeter (m3)
1 Piece → 1 chikamu
1 Piece / Chidimbu → 1 chikamu
1 package → 1 rongedza
1 bhokisi → 1 Dosi
1 Sack → 1 saga
1 chikamu → 1 Chikamu
1 Mukombe → 1 becher
1 Girazi mukombe → 1 girazi
1 Pairs → 1 vaviri
1 gumi → 1 Dutzen
Ndinokutendai nekufarira kwenyu saiti yedu, tinokushuvirai kubudirira muzvidzidzo zvenyu zveGerman.
Kana paine musoro wenyaya waunoda kuwona pane yedu saiti, iwe unogona kuzvitaurira kwatiri nekunyorera kuforamu.
Nenzira imwecheteyo, iwe unogona kunyora chero mimwe mibvunzo, maonero, mazano uye ese marudzi ekushoropodza nezve yedu nzira yekudzidzisa chiGerman, edu eGerman zvidzidzo uye webhusaiti yedu.